Horoscope Archives - Blacker
“မွနျမာပွညျ အနာဂတျနှငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ငှစေက်ကူ၏ နိမိတျပုံ အဟော”
July 22, 2020 Blacker	0 Comments
“မွနျမာပွညျ အနာဂတျနှငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ငှစေက်ကူ၏ နိမိတျပုံ အဟော” တရားဝငျငှကွေေး အဖွဈသုံးစှဲမညျ့ တဈထောငျတနျငှစေက်ကူ သင်ျကတေ နိမိတျပုံအကွောငျးမဟောပွောမီ ယခငျဟောပွောခဲ့သညျမြားမှ သာဓက တဈခုကို တငျပွလိုပါတယျ။ -၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၃၁) ရကျနေ့
ကံကောင်းခြင်း သဘောဆောင်တဲ့ လက်ကောက်ပေါ်က တြိဂံပုံနှင့် အစင်းကြောင်းများ အကြောင်း
June 24, 2020 June 27, 2020 Blacker	0 Comments
ကံကောင်းခြင်း သဘောဆောင်တဲ့ လက်ကောက်ပေါ်က တြိဂံပုံနှင့် အစင်းကြောင်းများ အကြောင်း… Rascette lines တွေဆိုတာ လက်ဖဝါး နဲ့ လက်ကြား လက်ကောက်ဝတ် အပေါ်က ကန့်ပေးထားတဲ့ အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ကွေးကောက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်
“အိမ်မြှောင်နိမိတ်” (အိမ်မြှောင်နှင့် ပတ်သက်သော နိမိတ်များအကြောင်း)
June 17, 2020 June 17, 2020 Blacker	0 Comments
“အိမ်မြှောင်နိမိတ်” (အိမ်မြှောင်နှင့် ပတ်သက်သော နိမိတ်များအကြောင်း) အိမ်မြှောင်သည် များသောအားဖြင့် နေအိမ်တွင်ရှိသော တွားသွားတိရိစ္ဆာန် အကောင်ငယ်ဖြစ်၏။ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး (အော်မြည်) မှုမှာ မကြာခဏ အော်တတ်၏။ အချို့အိမ်မြှောင်သည် နှစ်ရက်သုံးရက်မှတစ်ကြိမ် စုတ်ထိုး၏။ ထိုကဲ့သို့ကြားပါက “သင်လည်း
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (ဇွန်လ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက် အထိ)
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (ဇွန်လ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက် အထိ) “တနင်္ဂနွေ” ထူးခြားသော သတင်းစကား ကြားသိရလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်များ နှေးကွေးနေမည်။ စိတ်ညစ်နေ လိမ့်မည်။ ဝေးနေသူများ ပြန်လည်
“သိန်းသောင်းချီ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံပေါ်က ငါးရုပ်”
May 28, 2020 Blacker	0 Comments
“သိန်းသောင်းချီပိုင်ဆိုင်နိုင်သော တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံပေါ်က ငါးရုပ်” ကျွန်ုပ်သည် လက္ခဏာပညာကို အသက် ၁၃ နှစ်ထဲက လေ့လာလိုက်စားခဲ့သည်။ သင်ယူခဲ့သော ပညာရပ်များကိုလဲ အပြင်တွင် လက်တွေ့ကျကျလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ လက္ခဏာဆရာလောကသို့ဝင်လာခဲ့တာပါ။ လက္ခဏာပညာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ၇၅% လောက်မီးမောင်းထိုးပြထားသလိုပါပဲ။ ဒီလတော့လက်ဝါးပြင် တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံမှာရှိတဲ့
Three Factors You Should Notice When You See A Lizard
May 23, 2020 May 25, 2020 Blacker	0 Comments
The lizard is usuallyasmall reptile in the home. The barking of the knuckles often screams. Some rodents brush